Isku qor Cusboonaanta Qoyska
Hambalyo ku saabsan qaadista tillaabo muhiim u ah isu diyaarinta mustaqbalka cunuggaaga! Boston Saves, barnaamijka akoonnada keydadka carruurta ee magaalada, ayaa kaa caawin kara inaad keydiso oo aad u qorsheyso cunuggaaga kulleejada ama tababarka mihnadeed. Fadlan buuxi foomkan si aad u hesho macluumaadka ku saabsan:
Dhacdooyinka Imaatinka Boston Saves
Fursadaha lagu kasbado lacag badan mustaqbalka ilmahaaga
Gelitaanka nidaamka si aad u eegto koontada cunnugaaga (qoysaska u-qalma)
Ka dib markaad geliso macluumaad bog, guji Xiga si aad ugu dhaqaaqdid bogga ku xiga. Guji Midkii hore si aad ugu laabatid bogagga hore si aad u fiiriso ama u tafatirto jawaabahaaga. Markii lagu dhammeeyo foomka, xusuusnow inaad gujiso Dhamaystir iyo Gudbi si aad u keydiso oo aad u soo dirto jawaabahaaga.
Taleefan # (Ikhtiyaari ah):
Ciwaanka (Ikhtiyaari ah):
<Guji si aad u doorato> AK AL AR AS AZ CA CO CT DC DE FL FM GA GU HI IA ID IL IN KS KY LA MA MD ME MH MI MN MO MP MS MT NC ND NE NH NJ NM NV NY OH OK OR PA PR PW RI SC SD TN TX UT VA VI VT WA WI WV WY -- -- -- AB BC MB NB NF NS NT NU ON PE QC SK YT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Other
Sumadda Boostada (ZIP):